Danjire Sayid Shariif C/laahi “Siidkeey” oo ahaa Safiirkii Soomaaliya ee Koonfur Afrika oo geeriyoodey – idalenews.com
Danjire Sayid Shariif C/laahi “Siidkeey” oo ahaa Safiirkii Soomaaliya ee Koonfur Afrika oo geeriyoodey
Danjirihii Soomaaliya u fadhiya dalka Koofurka Afrika Sayid Shariif C/llaahi ayaa ku geeriyootay Isbitaal ku yaal magaalada Pretoria, kadib markii labadii maalmood ee la soo dhaafay uu xanuunsanayay.
Ambassador Sayid Shariif ,oo ka soo shaqeeyay howlaha waxbarashada iyo samafalka bani’aadanimo, ayaa waxa uu diblomaasiyadda ku soo biiray mudadii labada sano aheyd ee ugu dambeysay noloshiisa , isagoo noqday Safiirkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee Koofur Afrika. Safiirka ayaa si rasmi ah u magacaabey dowladii kmg ee Shariif Sheikh Axmed, waxuuna ka soo jeedaa beelaha Digil iyo Mirifle.
Allaha u naxariistee Danjiraha ayaa ka qeyb qaadanayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada Ganacsatada Soomaaliga loogu geysto dalka Koofur Afrika, isagoo la shaqeynayay gudigii xaqiiq raadinta ee dowladda u dirtay dalkaas.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Danjiruhu, waxaana uu eebe uga baryay inuu janadii fardowso ka waraabiyo.
Sidoo kale wasaarada arrimaha dibada iyo iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Danjiraha, iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa halyey qaran oo wax badan ka qabtay howlihii loo igmaday.
Ku simaha Madaxweynaha ahna Afhayeenka Barlamaanka Jawaari oo qaabilay Madaxa UNHCR iyo wafdigiisa oo Muqdisho Yimid
Daawo: Maxay ku heshiiyeen Dowlada Somalia and Somaliland oo shirkoodii Turkiga uu soo idlaadey